Unboxing wokuqala kunye nokuqala kokuvela kweApple TV 4k | Ndisuka mac
Unboxing wokuqala kunye nokuqala kokuvela kweApple TV 4k
Abathengi abanethamsanqa abangakhange balinde i-Apple TV 4k entsha, baqala ukuyifumana emakhayeni abo. Ukushiya imbambano bucala, malunga nokuba liqela elitsha okanye ukuhlamba ubuso, esele ifuna i-Apple TV, safumana iqela elomeleleyo. Nangona ngoku siza kubala ukuba yeyiphi imbonakalo yabasebenzisi xa bevula ibhokisi yeApple, siza kuthi ngaphakathi liqela elihlaziyiweyo. Ngeli thuba, sine I-chip ye-A10x, efanayo ne-iPad Pro mount.Oko kuthetha ukuba sine-Apple TV okwethutyana. Ke ngoko, umzuzu u-Apple okanye abaphuhlisi bafuna ukucudisa isixhobo, singasonwabela.
Kodwa masidlulele kwimveliso ebonakalayo. Endlwini sinayo: imiyalelo, intambo yombane, iApple TV kude, 4k, intambo yombane kwaye ngokucacileyo, iApple TV 4k. Into yokuqala ebamba iliso lakho, kulungiso lolawulo olukude. Ngoku iqhosha lemenyu linendandatho elijikelezileyo. Eli yayilibango elivela kwiinguqulelo zangaphambi kwesizukulwana se-4, kuba ulungelelwaniso lomyalelo luthintela ukuba sazi amaxesha amaninzi, leliphi iqhosha esilicinezelayo. Le iringi ejikeleze iqhosha lemenyu ibonelela ngoncedo oluthile kulubamba. Yenza imisebenzi yezitshixo ze-F kunye ne-J kwikhibhodi eqhelekileyo, ukuma ngaphezulu kwebhodibhodi kwaye ube nembono echanekileyo. Le nto intsha iyimpumelelo ngokupheleleyo.
Enye into ebalulekileyo ebonakalayo ifumaneka ngasemva, yile ukususwa kwezibuko le-USB-C. Kwelinye icala, izibuko le-Ethernet esisifumana kwi-Apple TV 4k, ngeli xesha kunjalo Gigabit. Izibuko elisusiweyo lisetyenziselwa kuphela ukufumanisa isifo. Ngexesha lokudibana ngaphandle kwamacingo, olu hlalutyo lunokwenziwa ngaphandle, ngaphandle konxibelelwano olunentambo. Endaweni yoko, izibuko le-Ethernet lisivumela ukuba sixhume kwi-router yethu ngentambo, kuba ukuhanjiswa kwedatha kwi-4k kufuna ukugcwala okubalulekileyo ngendlela ezinzileyo nengaguqukiyo. Iziphumo zokuphuma komsindo nazo ziyanyamalala.
Kwibhokisi sifumana intambo yombane, esetyenziselwa ukugcwalisa i-remote control, kunye nekhebula lombane.
Nje ukuba sivule isixhobo, Inkqubo yokusebenza iye yaphucula kakhulu ukusukela kwinguqulelo yesi-4. Ukuba uvela kwisizukulwana se-4 se-Apple TV kwaye une-Screen Screen Sync evuliwe, yonke i-Apple TV ihlaziywa ngolwazi oluvela kuhlobo lwangaphambili, kubandakanya imidlalo. Ukuba le yi-Apple TV yakho yokuqala, gcina i-iPhone yakho isondele kwikhompyuter kunye ne-bluetooth yenziwe yasebenza. Isoftware yekhompyuter iya kwenza konke okunye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Unboxing wokuqala kunye nokuqala kokuvela kweApple TV 4k
Endala nayo yayine-ethernet. Akakabuyi ". Into entsha kukuba igigabit entsha
Ukuchaneka, yimpazamo kwaye iyalungiswa. Enkosi ngegalelo!
Kwaye iphi i-unboxing?
Kuphi ukubonakala okuhlukileyo?
Ndiya kufunda inqaku apho ndicinga khona malunga nesihloko kwaye ke sisifutshane kwaye uncamathisela iimpawu ...
Iimpawu ezintsha ezingama-25 uyakonwabela ngeMacOS ePhakamileyo yeSierra